How'd it happen and more reports?: The Voice Behind Changi Airport's Public Announcement System!
(ခြင်ကျားပူး တရုတ်လေသံနှင့်) စင်္ကာပူရဲ့ ပင်မနိုင်ငံဝင်ငွေဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတကာခရီးသွားဧည်သည့်တွေလာရောက်မှု ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ၅၅.၄သန်းကို စင်္ကာပူရဲ့ချန်ဂျီလေဆိပ်ကို လေကြောင်းလိုင်း ၁၀၀ကျော်နှင့် လူမျိုးပေါင်းစုံ ၃၈၀ကျော် ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း ၉၀ ကျော်ကို တပတ်ကို လေယာဉ်ပေါင်း ၇ ထောင်ကျော်ဆိုဒ်ပါတယ်။
ဒီလောက်အများကြီးကို ချင်ဂီလေဆိပ်က ၀န်ထမ်းတွေလဲ ဒီလောက်များပြားလှတဲ့ လူမျိူးစုံဧည်သည်တွေကို ၂၄ နာရီပတ်လုံး မနားမနေ ဘယ်လို ဧည်ဝတ်ကျေအောင် မိမိတာဝန်တွေ မပျက်မကွက် ဘယ်လိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးနေရတဲ့ဆိုတာ သိရင် အံ့သြ သွားကျမှပါ၊ ပြဿနာပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်ပါဘဲ?
အဲဒီထဲက Public Announcement Systemဆိုတဲ့ PA System ၅မိနစ် ၁၀မိနစ်ခြား တောက်လျှောက်ဆိုသလိုဧည်သည်တွေ သတင်းတွေကို ကျော်ငြာပေးနေရတဲ့ အလုပ်တွေ ဧည်သည်လေးတွေ လေယာဉ်ထွက်တော့မယ် သတိပေးတာတွေနှင့် ဧည်သည်တွေ သိခြင်တာတွေ စုံစမ်းလို့ရတဲ့ information counter တွေ မှာ အလုပ်လုပ်နေသူတွေ နှင့် အမြဲ ပြုံးချိုချိုလေးတွေနှင့် ipad လေးကိုင်ပြီး တနေကုန် မတ်တပ်ရပ်နေကျရတဲ့ ဧည်ကြို မမလေးတွေလဲ ခြေသလုံးတွေလဲ ကြီးနေတာကို တွေ့ရပါလိုက်မယ်ဗျ!
တရက်တရက်ကို လူပေါင်း သိန်းဂဏာန်းလောက်ကို ဆားဗစ်ပေးရတာပါဗျ၊ ဘယ်လောက်ဘဲ ကောင်းအောင် ဆားဗစ်ပေးနေနေ အခန့်မသင့် ကံဆိုးချိန် အတိုင်ခံရရင်တော့ ဌာနစုံလပတ်အစည်းအဝေးတွေမှာ
မိမိပြဿနာကို မိမိဘာသာရအောင်ဖြေရှင်းပေတော့ဗျ၊ အလုပ်ရလွယ်သလို ပြုတ်ဖို့လဲ လွယ်တယ်ဗျ?
ဒါကြောင့်လဲ ဘာဆိုဘာမှမရှိသောကျွန်းသေးသေးလေး ရေပါဝယ်သောက်နေရသော ခြင်ကျားပူး(တရုတ်လေသံ)ဆိုတာ လူတွေ အပေါ်မှာ ဘယ်လိုခေါင်ပုံဖြတ် အမြတ်ထုတ်ပြီး လူတွေကို ခိုင်းစားရမယ်ဆိုတာ ဂရုကြီး လီကွမ်ယူက ကမ္ဘာကြီးကို သင်ခန်းစာပေးသွားကျတာပါဘဲ?
The customer is always right ဆိုတာပါဘဲဗျ! ဒါမျိုးတွေ အမိမြန်မာပြည်မှာ ကြားဖူးမယ်တောင်မထင်ပါဘူးဗျ....
ဒီနေ့ဘဲ လုပ်တာ ၅နှစ်ကျေိာပြီ....တခြားဌာနတခုက ပြဿနာတက်လို့ ပရိုက်ဂျက်တခုလုံးကို ရုံးချုပ်က အင်တာမယ်အော်တစ် လာစစ်သွားသေးတယ်ဗျ....
ဟီး..ဟီး..အားလုံးလဲ.... ဖြေလိုက်ကျတာ... အမှား မှားအယွင်းယွင့်ပေါ့ဗျ....ဘယ်ပြောကောင်းမလဲဗျ?
Changi Airport serves more than 100 airlines flying to some 380 cities in about 90 countries and territories worldwide. Each week, about 7,000 flights land or depart from Changi, with more than 55.4 million passengers passing through the airportayear. We believe that the facts and figures speak for themselves.
Posted by Ko Nge at Wednesday, January 18, 2017
Labels: စီးပွားရေး, လူထုအော်သံ